Liverpool ayaa heshiis waqti dheer ah ka dhaxeysa Glatzel iyo da 'yarta - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Liverpool ayaa heshiis waqti dheer ah ka dhaxeysa Glatzel iyo da 'yarta
Liverpool ayaa heshiis waqti dheer ah ka dhaxeysa Glatzel iyo da 'yarta
Liverpool Academy aad ayaa loogu qiimeeyay Paul Glatzel wuxuu heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixay naadiga.
Ninka dhalinyarada ah ee 18 sano waxaa badanaa loo soo bandhigaa inuu yahay mid ka mid ah kartida ugu yaabka badan ee dhalinyarada. oo laga aasaasay Kirkby, wuxuu ku socdaa barnaamij dhaqan-celin ah magaalada Melwood kadib markii uu dhaawac ka soo gaadhay jilibka intii lagu gudajiray kulankiisii ​​ugu horreeyay ee kooxda ee xilli-ciyaareedkii hore.
Glatzel ayaa Liverpool u saxiixay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadeed bishii Febraayo waxaana lagu abaalmariyay xaalado soo hagaagay Arbacadii ka dib olole xasaasi ah oo ka socday 2018 illaa 2018.
Wuxuu dhaliyay goolal 28 wixii ka hooseeya 18 sanadkii hore wuxuuna ahaa gooldhaliyaha ugu sareeya Tartanka Kubadda Cagta ee Dhallinyarnimada FA .
Dhallinta yar ayaa kaqaybqaatay isu diyaarinta Jurgen Klopp ee 2019-20 kahor intaanu dhaawacmin intii lagu jiray guushii 6-0 on Tranmere Rovers 11 Luulyo. 19659002] Wuxuu ku dhashay Liverpool, Glatzel wuxuu horseedi karaa xariiqda ama wuxuu u shaqeyn karaa sida ilaaliyaha dhibic wuxuuna ku biiray kooxda heerka koowaad ee akadeemiyada U6.
Weeraryahankan isku midka ah wuxuu leeyahay dhaxal laba-geesood ah: labadiisa waalid waa Jarmal waxaana uu matalay labada wadan ee ay ku dhasheen iyo England dhalinyarada. 19659009]
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/soccer-transfers/story/3940713/liverpool-sign-teen-glatzel-to-long-term-deal
Griezmann wuxuu doorbidayaa joojinta cayaaraha si xun ula dhaqanka
Ciyaartoyda reer Mexico waxay casharro ka qaataan qaabkii ay u soo mareen Argentine